दोस्रो संस्करणको तयारीमा | samakalinsahitya.com
बिहाचाहिँ गरेको तर गुरु ट्रेनिङ र मेट्रिकचाहिँ नगरेको सुकुटे, निक्कै सुकुटे; साह्रै होइन तर काले नै; हेर्दै चुर्से-चुर्से अठारको नारायण शर्माले पैँसठी सालको मई महिनामा बिनाअन्तर्वार्ता गाउँकै प्राथमिक पाठशालामा शिक्षकको निम्ति हातैमा नियुक्ति-पत्र पाएका हुन्।
पैँसठ सालमा नियुक्ति पाएका नारायण सरले पहिलो महिना अस्सी रुपियॉं तलब पाएका थिए। थापेर आठ-दस रुपियॉं आफूसँग राखेर अरू सबै स्वास्नीलाई दिएका थिए उनले। अर्को महिनाको तलब थापेर ल्याउँदा स्वास्नीले पहिलेकै बाट पनि केही बचाएर राखेकी थिई। त्यसपछि क्रमश: नारायण सरको तलब बढ़्दै आएकै हो। शुरुमा अस्सी रुपियॉं थाो उनले कुनै दिन अस्सी सय रुपियॉं थापिइन्छ तलब भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् तर अस्सी सय नाघेर तलब केही माथि पुग्दा पनि नारायण सरले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको जीवन-स्तर अलिकति पनि माथि उठाउन सकेनन्।
जेठी छोरी। नारायण सरकी जेठी छोरी। नौमा फेल भई। सरलाई नमिठो छोरी फेल भएकोमा भन्दा पनि सरकी छोरी फेल भएकोमा लागेको थियो।
त्यो नमिठोपनले आफूबाट निख्रन नपाई बम बस्तीदेखि मान्छेहरू आए केटालाई पनि साथै लिएर। सरकारी नोकरी गर्ने, ब्लकमा—बुझेर अरू धेर बुझ्न नचाही ‘‘हुन्छ,’’ भनिदिए सरले।
तेह्र वर्षअघिको कुरो हो यो।
माइली छोरी पढ़्दै थिई। राम्रैसित पढ़्दै थिई। दसमा थिई एघार वर्षअघि। एक दिन सॉंझ परिसक्दा पनि छोरी घर आइपुगिन। अर्को दिन सॉंझ परिसक्दा पनि छोरी घर आइपुगिन। तेस्रो दिन सॉंझ नपरी दुई बुढ़ाहरूसित दुई अधबैँसे नारायण सरको घर सोध्दै आइपुगे।
यो गोपाल, नारायण सरको तेस्रो र अन्तिम पनि सन्तान जो कल बन्द गरेर अहिले अर्कोपल्ट उस्तै आवाज सुन्नलाई पर्खिरहेछ—त्यो समय , त्यो समय भन्नाले सरकी सुधी मानिएकी माइली छोरीले त्यसरी सबलाई छक्क पारेकी समय दिदीचाहिँभन्दा एक क्लास तल नौमा पढ़्दै थियो।
‘‘सरलाई के छ र? दुवै छोरीहरूको बिहे गरी दिइहाल्नु भो। गोपाललाई पछिबाट तपाईँकै काम दिँदा भइहाल्यो नि।’’ हेड सरले नारायण सरलाई भनेको त्यही समयतिर हुनुपर्छ।
नारायण सरले हेड सरको कुरा सुनेका थिए। प्रतिक्रियामा केही भनेका थिएनन्। आफ्नो काम छोरालाई दिने कुरो उनले सोचेका थिएनन् त्यो दिनसम्म त्यसैले नदिने कुरो पनि सोचेका थिएनन्।
दिनु पर्दैन।—त्यो दिनको त्यही क्षण उनले सोचे।
‘‘कति छ सरको अब?’’ सोधे हेड सरले।
‘‘छ अझै। बाह्र-तेह्र साल छ।’’ भनेका थिए शर्मा सरले।
‘‘ए’’ भनेका थिए हेड सरले। त्यति।
‘‘साथीहरूसितै बस्छु।’’ गोपालले बाबुलाई भनेको थियो।
‘‘पर्दैन हरि काकाकोमा बस्।’’ बाबुले कड़ा स्वरमा भने।
गोपालले केही भनेन भन्नु नसकेर।
‘‘अस्ति भेटेर भनिराखेको छु हरिलाई।’’ पनि भने बाबुले।
परीक्षा शुरू हुनुभन्दा दुई दिनअघि शर्मा सर आफैले छोरालाई पर्ने भाइ शहरको हरि शर्माको घर पुर्याए।
‘‘इक्जाम राम्रो गर्नू। नघुम्नू धेर।’’ हिँड्ने बेलामा छोरालाई भने।
समय पाइए अरू दुईवटा काम गर्ने विचारसित निस्केका थिए शर्मा सर बिहान घरबाट। पहिलो काम ननपाएको निक्कै दिन भएको हुनाले सुगर नपाउने र दोस्रो काम डेढ़ महिनाअघि थाहा गरेको तर हाल दुखाइको मात्रा निक्कै बढ़ेको आफ्नो दाहिने खुट्टा किन दुख्छ डाक्टरलाई देखाएर जान्ने।
बजारदेखि थाकेर आइपगेका सरले झोला राखेर आफूलाई चौकीमा बिसाए।
केही क्षणपछि मुन्टो मात्रै चुह्लातिर घुमाएर उनले भने, ‘‘नुनकै बनाऊ है।’’
फेरि केही क्षणपछि मुन्टो नघुमाइ भने, ‘‘सुन्यौ?’’
चियासित स्वास्नी आई।
‘‘सौदा निकाल,’’ सरले भने।
साना-ठुला केही पोकाहरूपछि एउटा किताब पक्रेर निस्क्यो हात झोलाभित्रदेखि। चारसम्म पढ़ेकी गुरुमाले ‘समयाङ्कन’ पढ़ी अनि चौकीकै सरलाई दिई।
हप्ता दिन जत्तिपछि शर्मा सर चौथो श्रेणीका विद्यार्थीहरूसित थिए।
‘‘सन्चबार, आइतबार के गर्छौ तिमीहरू?’’ विद्यार्थीहरूलाई सोधे सरले।
उत्तर कस्सैलाई आएन। हेराहेर गरे तिनीहरूले एकाअर्कालाई।
‘‘काम गर्दैनौ घरमा?’’ सजिलो बनाए प्रश्न सरले।
‘‘गर्छौँ सर?’’ प्रायैले भने।
‘‘के गर्छौ?’’ प्रश्न अप्ठ्यारो भइहाल्यो फेरि।
प्रश्न दोहोर्याए सरले।
‘‘दाउरा खोज्न जान्छु सर।’’ एउटाले भन्यो।
‘‘म पनि जान्छु सर।’’ अर्काले भन्यो।
‘‘सर म पनि जान्छु।’’
नजाने एक-दुई मात्र रहे।
‘‘जङ्गलमा’’ सरले भन्न शुरू गरे, ‘‘ढुङ्गामास्तिर, भिरतिर, भुइँमै पनि,’’ दुवै हात अघिल्तिर ल्याए ‘‘एत्रो-एत्रो डल्लो पाउँछ।’’
‘‘पाउँछ।’’ आफैले भने अनि बताए। ‘‘तमर्के भन्छ त्यसलाई।’’
‘‘देखेको छु सर।’’ तमर्के चिन्ने एउटा उठ्यो।
‘‘अरूले?’’ सबैलाई हेरे सरले।
तमर्के देख्ने, चिन्ने आठ-दस हातहरू उठे।
‘‘खोजेर ल्याई दिनू घरमा।’’ भनेर केही क्षण रोकिए र भने ‘‘किताब खोल।’’
चामल बॉंड़्नेे दिन थियो त्यो, त्यो महिनाको। थाहा पाएर विद्यार्थीहरू सबै आएका थिए। त्यो महिना मने पनि होइन, क्विनटले पनि होइन, बिचको मझौला बोरामा चारदेखि घटेर तीन बोरा मात्रै आएको थियो चामल। दोस्रो बोरामा चामल अझ अलिकति बॉंकी रहँदै पङ्क्तिको अन्तिम विद्यार्थीले चामल थापिसकेथ्यो। खोल्नै नपरेको तेस्रोमाथि थोरै रहेको दोस्रोलाई पनि खप्टाएर राखेपछि चारको एउटा केटालाई हेड सरले भने,‘‘ताला लगा।’’
बाह्र-पन्ध्र मिनटको बाटो बिस्तारो हिँड़ेर घर पुगेपछि चौकीमा बसेका शर्मा सरले याद गरे—हिजोको भन्दा थाहा पाउने धेर दुख्दैछ घुँड़ा।
‘‘राम्रो गरेँ,’’ भन्यो घर आएर गोपालले।
केही भनेेनन् सरले। सुने खालि।
पढ़्नुमा राम्रो छोरामाथि भरोसा थियो सरलाई। फेल होला कि भन्ने सोचेकै थिएनन् सरले। बरू , अब कता पढ़ाउनुपर्ने सोच्दैथे। अब पढ़ाउनुलाई सरलाई शहरै पठाउनुथ्यो छोरालाई। कहॉं राख्नु?—उनी सोच्दैथे।
‘‘साइन्स पढ़्छु।’’ गोपालले दुई-तीनचोटि भनिसकेथ्यो।
एक दिन सर शहर गएर हरिकोमा पनि निस्किएर, डाइवेटिक र दुख्ने खुट्टालाई पनि दवाई लिएर आए। त्यसको दस-एघार दिनपछि गोपालको परीक्षा फल आयो।
‘‘सेकेन्ड भएछु।’’ खुशी न खुशी अनुहारको त्यसले बाबुलाई भन्यो।
‘‘अलिक कोसिस गरेको भा फस्ट हुन्थेछस्।’’ खुशी नै अनुहारको शर्मा सरले भने।
दुई-तीन दिनपछि शर्मा सरले छोरालाई केही रुपियॉं दिएर फारम भर्न पठाए उँभो पढ़्नुलाई।
साथीहरूसित गयो त्यो, त्यो दिन फारम भर्न।
काकाकोमा बस्नु मानेन गोपाल।
‘‘बस्दिनँ त्यॉं,’’ आमाचाहिँलाई भन्यो त्यसले।
आमाले बाबुलाई सुनाइहाली।
‘‘किन?’’ बोलाएर सोधे छोरालाई शर्मा सरले। निरुत्तर उभिरह्यो गोपाल।
‘‘किन बस्दैनस् काकाकोमा?’’ सोधे फेरि।
‘‘साथीहरूसित बस्छु।’’ भन्यो त्यसले।
‘‘नपढ़्नुलाई?’’ हकारे बाबुले। तर कुनि किन त्यहीँ बस् भनेर कर गरेनन् उनले छोरालाई।
कलेज पढ़्नलाई साथीहरूसित एउटा कोठा भाड़ामा लिएर बस्दा दसैँ-तिहार र ठन्डा महिनाको छुट्टीमा बाहेक रुपियॉं सकिँदा-सकिँदा मात्रै घर आयो गोपाल ती दुई वर्षमा।
तेस्रो वर्ष कलेज पढ़्नलाई त्यसले त्यसरी घरबाहिर बस्नै परेन। किनभने उच्चत्तर माध्यमिकको परिणाम-पत्रसित आइपुगेको अँध्यारो अनुहारको गोपालले बाबुलाई भन्यो, ‘‘एक सय सोह्रमा6पास, सिधै भिक्टिमाइज् हो यो।’’
केही भनेनन् बाबुले।
‘‘रि-एसेसमेन्ट गराउँछु,’’ पनि भन्यो त्यसले।
बाबुले केही भनेनन्।
वर्षभरि गाउँ घुमेर अर्को वर्ष परीक्षा दिनलाई मात्र गयो गोपाल।
परीक्षा फल आयो।
फेल भएकै आयो।
भिक्टिमाइज् भनेन त्यसपटक त्यसले।
रि-एसेसमेन्ट पनि भनेन।
तेस्रोपटक त्यसले परीक्षै दिएन।
उच्चत्तर माध्यमिक अनुतीर्ण गोपाल गॉंउमै हल्लिरह्यो त्यसपछि। गॉंउमा त्यस्तो कुनै पनि वृत्ति थिएन जसमा त्यसले आफूलाई संलग्न गराओस्। अधुरो शिक्षाको त्योसित गाउँदेखि बाहिरिने साहस पनि थिएन।
‘‘पल्टन जान्छु,’’ पनि भन्यो गोपालले एक-दुईपल्ट।
बाबुले जवानीको आफूजस्तै शारीरिक गठनको जवान छोराको विचारमा नाक खुम्चाए।
पल्टनमा भर्ती हुनलाई प्रत्येक महिना कटकपाहाड़ धाइरहने साथीहरूसँग त्यस विषयमा सोध-खोज पनि गर्यो त्यसले। तर साथीहरूले शर्माहरूको भर्ती खुलिएको र खुलिने खबर कहिल्यै ल्याएन।
बिजिनेस गर्ने विचार पनि गरेको थियो गोपालले। गोपालले बुझेको बिजिनेस सानु दोकान थियो। विचार मात्रै सुनाउँदा ‘‘पर्दैन त्यस्तो डुब्ने काम’’ भनिहाले बाबुले।
‘‘दोकान नखोल्नू, खान्छ-खान्छ तिर्ने बेलामा कालो पार्छ अनुहार जो पनि। बरू अरू बेपार ठिक गर्नु सक्यो भने।’’ पनि भने बाबुले छोरालाई।
तर दोकान खोल्नुबाहेक अरू पनि बिजिनेस हुनसक्छ भन्ने गोपालले बुझेकै थिएन। एउटा कैँया आएर कुचो उठाएर टाटाको टाटा सिलगढ़ी पुर्याउँथ्यो। कति नाफा भयो होला भनी त्यो साथीहरूसित बसेर हिसाब गर्थ्यो। अर्को कैँया आएर अदुवा उठाएर उसरी नै सिलगढ़ी पुर्याउँथ्यो। थुक्क! यो पनि थिएछ त गरेको भा— गोपालहरू मनमनै भन्थे। अब केही छैन गाउँमा भन्ने लागिरहेको बेला अर्कै कैँयै आएर अर्को व्यापार शुरू गर्थ्यो।
छोरामा आफूले देखेको सम्भावना क्रमश: धुमिल बन्दै गएर हराई नै सकेको थियो। त्यसैकारण दुई वर्षअघि बसेँ भने छोराको जीवन सुरूबुरू बित्छ भन्ने सोच बाध्य भएका थिए शर्मा सर।
शर्मा सरलाई कतिचोटि पहिले पनि लागिसकेको—परिवारको प्राथमिक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति मै महिनाको सम्पूर्ण आय सकिन्छ। प्रत्येक महिना ‘‘अर्को महिना’’ भनेर स्वास्नी, छोरा-छोरीका इच्छाहरूलाई अर्कोपल्ट फेरि मार्नुपर्छ। पहिले छोरीहरू हुँदा र नहुँदामा फरकै छैन।—फेरि लागेर आश्चर्य लाग्यो।
प्राथमिक पाठशालाको शिक्षक परिवारको टाउके हुनसक्छ। उत्तरदायित्व वहन गरेर परिवारको, परिवारको लागि बॉंचु सक्छ तर परिवारलाई बचाउनैको निम्ति मात्र—लाग्यो सरलाई।
तर घरभित्र र मनभित्र जसरी बॉंचे पनि बाहिर चिन्नेहरूले इज्जतै गर्छन्। केही नहुनुभन्दा आवश्यकताको समुद्रमा इज्जतको च्याङ्ले लाइभ ज्याकेट लगाएर आजीवन आफूजस्तै परिवारलाई पनि घॉंटीसम्म डुबाइरहनु तर बॉंचेर बचाइरहनु ठिक—पनि लाग्यो शर्मा सरलाई।
दिइनँ भने धोका हुन्छ होला पछि।—मनमनै भने।
दुई वर्ष त्याग्दा छोराको जीवन बन्छ भने दिन्छु।—निश्चयजस्तै गरे।
अब आफ्नो दोस्रो संस्करणको तयारीमा लागिहाल्ने निर्णय लिए शर्मा सरले।
पाठशाला नगएर एउटा सोमबार तिनी एक के. जी. घिउसित त्यसै सन्दर्भमा जान्नलाई सम्बन्धित कार्यालय गए।
घिउ थापेर, आफू बसेर छोरालाई काम दिन के-के गर्नुपर्छ राम्ररी सिकाएर ‘‘यताको त चिनी कि गुँड़ मिसाको हुन्छ। सरहरूको तिर प्योर मह पाइँदैन?’’ विभागीय कर्मचारीले सोधेका थिए।
बेलुका घर आएपछि शर्मा सरले बाकस खोलेर, खोदलेर आफ्नो बिमारीसित सम्बन्धित केही कागजहरू झिके। अर्को दिन बेलुकी उनले शारीरिक अशक्तताको फलस्वरूप पेशाबाट अवकाश पाऊँ र सरकारी प्रावधानमुताविक आफ्नो काम छोरालाई दिइयोस् भन्ने निवेदन-पत्रको खेस्रा बनाए।
चार-पॉंच दिनपछि पाठशालाबाट फर्किँदा शर्मा सरको हातमा एउटा महको बोतल थियो।
त्यसपछि अस्वस्थ शर्मा सर त्यस सन्दर्भमा धेरैपल्ट सम्बन्धित विभागीय कार्यालय गए। धेरैपल्ट झोला झुन्ड्याएर, थोरैपल्ट खाली हात।
झोला झुन्ड्याएर कार्यालय पुगेका शर्मा सरले अधिकारीहरूबाट जुन व्यवहार पाए, खाली हात पुगेका उनले संसार स्वार्थमय देखे। यहॉंसम्म कि अघिल्लोपल्ट झोलासितको भेटपछि जसलाई उनले साह्रै जाती मान्छे ठानेका थिए, खाली हातको भेटपछि मान्छे पनि मानेनन्।
शर्मा सरलाई त्यही सन्दर्भमा एउटी सही चाहिएको थियो एकजनाको। एउटा पोका झुन्ड्याएर बिहानै पुगे तिनी त्यस महानुभावको घरैमा।
देलोमै उभिएर आफू आउनुको कारण बताए उनले। पोका समातेको हात अघिल्तिर बढ़ाए।
‘‘के यो?’’ रिसाएर सोधे महानुभावले।
‘‘अलिकति ... घरकै।’’ ढॉंटे सरले।
‘‘कसले सिकायो तपाईँलाई यसरी आउनु? कसले सिकायो? तपाईँको एति नाथे घिउ खाएर मोटाउँछु मो? लानुहोस्, लगिहाल्नुहोस्, यो।’’ रॉंकिए उनी।
शर्मा सरको अनुहार र कानहरू पनि तातिएर आए। तातिएको कान टि...नि...नि...नि...बजे।
‘‘व्यवस्था बिगार्ने तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ।’’ बजेकै कानले सुने उनले।
इमान्दारी देखाउने मौका पाएछ साला।—मनमनै रिसाए सर।
सपनामा जस्तो हिँड़ेर फर्किए सर त्यहॉंदेखि।
त्यसपछि अर्को मान्छेलाई भेट्नु जानुअघि शर्मा सर निक्कै घोरिए।
एक त पहिल्यैदेखि सुकुटे नारायण शर्मा थप डाइवेटिकको रोगी—हड्डी र छाला भइसकेका थिए। जस-जसले जे-जे खाऊ भन्थे सबै खान्थे, जस-जसले जे-जे नखाऊ भन्थे सबै मान्थे। पकाएको के कॉंचो तितेकरेला कति खाए उनले हिसाब छैन।
औपचारिकता निर्वाह गर्न शुरू गरेको चार महिनापछि एउटा सरकारी चिठी आयो नारायण शर्माको नाममा। खोलेर पढ़े उनले। चौबिस तारिख मेडिकलको निम्ति मेडिकल कलेज, सिलगढ़ी जानू भन्ने सूचना रहेछ।
यत्तिका लामो अवधिसम्म गरेको पेशाको धुमधाम माया लागेर आयो उनलाई।
त्यसै क्षण उनले वर्ष दिनजति पहिले आफू बसेर छोरालाई काम दिने नजिकैको सर सम्झे। अनुभवी तिनै सरलाई मेडिकल साथी जान मनाउने विचार गरे।
पाहाड़बाट मदेश झरेका बिरामी सर सिलगढ़ीको गरमले हेर्दै पनि बिरामी देखिने भए।
बल्ल-बल्ल पालो आएको बिरामी नारायण शर्मा र उनलाई बिरामी प्रमाणित गर्ने डाक्टरकै कागजहरू हेरेर , हेर्ने डाक्टरले शर्मा सरलाई काम गन एकदमै अयोग्य मानेन।
‘‘आँखा राम्ररी देख्दिनँ।’’ भने सरले।
मसुमुसु हॉंसे डाक्टर।
‘‘कान पनि राम्रोसित सुन्दिनँ।’’ भनेर आफूलाई साह्रै दयनीय अनुभव गरे उनले।
‘‘जवाब ठिकै दिनु हुँदैछ।’’ सुनेर बित्थामा भनेछु लाग्यो सरलाई।
‘‘अर्को चौबिसमा आउनुहोस्।’’ डाक्टरले भने र लेखेर पनि दिए।
अरू केही भन्नै आएन उनलाई। केही क्षण चुपचाप बसेर तिनी उठे।
‘‘यो मेडिकल बोर्ड तल जानु पनि आन्दोलनकै उपलब्धि हो। दार्जीलिङमा भा एस्तो झन्झट नै नहुने। पहिलाकोहरूलाई खाड़ाले केई नसोधी एकै तालमा गरिदिन्थ्यो अरे।’’ सुनेको सुनाए बाटोमा साथी गइदिने सरले सरलाई।
श्रीमतीले तामा पनि पकाएकी रहिछ। तामाको स्वाद बिर्सन लागेको सरले ‘‘हाली देऊ मलाई पनि अलिकति,’’ भने।
‘‘होस् पर्दैन खानु। खुट्टा दुखेर फेरि फत्रक-फत्रक पर्नुलाई।’’ स्वास्नीले भनी।
‘‘नखॉंदा जाती छु र?’’ सर खरो बोले।
स्वास्नी अरू बोलिन।
डाक्टरहरूको त्यत्रो प्रिस्क्रिसन हेररे पनि काम गर्नु सक्छ भन्छ। सरकारी नियम छ, दिहाल्दा के जान्छ त्यसको—रातभरि सरलाई लागिरह्यो।
‘‘दवाई खान्नँ एक महिनै,’’ सङ्कल्प गरेर बिहानीपख शर्मा सर एक छिन निदाए।
भोलिपल्ट उनले दवाई खाएनन्।
बरू ‘‘कत्ति बार्नु? नखाई मर्नुभन्दा बरू खाएरै मर्छु।’’ भनेर आमा-छोरालाई अलग्गै पकाएको आलुको तरकारी थोरै खाए।
पहिले-पहिले दवाई खानु भुल्छु कि भन्ने लाग्थ्यो शर्मा सरलाई अब नखानु भुल्छु कि लाग्न थाल्यो।
आफ्नो बिमार बढ़ेर आउँदो चौबिसमा डाक्टरलाई काम गर्न अयोग्य देखिइएँ भने नमरुन्जेल ढुक्कैले बॉंचिन्छ भन्ने लागेको थियो सरलाई।
खाएनन् दवाई उनले।
जति-जति चौबिस नजिकिँदै आयो उति-उति अस्वस्थता बढ़्दै आएको थाहा गर्दै थिए उनी। बस्दा, बसिरहँदा पनि थाक्ने, फतक्कै गल्ने भइसकेका थिए। करैले गएर पाठशालाबाट सिधै घर आउँथे। आएर बसिरहन्थे कि त सुतिरहन्थे दिउँसै पनि। स्वास्नीले सोद्धा ‘‘ठिकै छु,’’ भन्थे। प्रतीक्षारत थिए उनी आउने चौबिसको।
हिजो तेइस तारिक शर्मा सरले गोपाललाई बोलाएर भने, ‘‘अर्कालाई कति दु:ख दिनु। तैँ हिँड़् भोलि मसित। किरणलाई दुइटा सिट भन् गएर।’’
आज बिहान आमा उठेकी थाहा पाएर गोपाल पनि उठिहाल्यो।
रातो घामको अर्धवृत्त डॉंड़ाभित्र थियो। आकाशभरि बादलको एकै टुक्रा पनि थिएन। कतिचोटि सिलगढ़ी गइसकेको गोपालले त्यहॉंको गरमको स्मरण गर्यो। स्मरणले नै त्यसलाई त्यो दिन असाध्यै कष्टकर लाग्यो।
दॉंत माझ्दै त्यो कलनेर गयो। कल खोल्यो त्यसले। कलदेखि झरेर भुइँमा बज्न थाल्यो पानी। मुख खकाल्यो गोपालले। हत्केलालाई अञ्जुली बनाएर फेरि पानी थाप्दा क्षणभर शून्यता छायो त्यहॉं। त्यही शून्यतामा गोपालले घरभित्र स्वास्नीमान्छे काहालिएर रोएकी सुन्यो। अञ्जुली भरिएर पोखिएर पानीले पुन: बज थालेको थियो भुइँमा। अञ्जुली भत्कायो गोपालले अनि कल बन्द गर्यो र अहिले त्यो भयको ठुलो भारी बोकेर अर्कोपल्ट स्वास्नीमान्छेको उस्तै रुवाइ पर्खिरहेछ।